Mhemberero neIshoko zveIsita muAlbuquerque
Nyika dzakabatana New Mexico Albuquerque
Easter haizove Easter pasina kuvhiiwa kweii, kana kune dzimwe mhuri, Easter inoreva kushumira kweSvondo mangwanani inoteverwa nebrunch inokosha. Tsvaga yeAlbuquerque Easter kupemberera sekushanyira ku zoo kutarisa mhuka kuti dziwane Easter inobata, kana kutsvaga dzimwe nzira dzekupemberera kuuya kwemasikati. Chibvumirano chinopiwa kune rondedzero yemasukirwo ePasika anokosha anobva kumabhoti kusvika kune mabhanhire nemabhadharo emitengo. Kana, tora mufananidzo wako kutorwa ne Easter Bunny.
Isita muNew Mexico nguva dzose inosanganisira kushanya kunzvimbo tsvene paChishanu Chishanu. Isu takabatanidza chibatanidzwa kune ruzivo pamusoro pekufambira kune Tome Hill. Takagoverawo zvikwata zveSancturio de Chimayo, imwe nzvimbo inonzi inozivikanwa yevafambi vanobva kumativi ose enyika.
Heino Pasika yako inogadzirira nzvimbo yakakura yeAlquerqueque.
Mhemberero dzeIsita, Eki Hasha uye zvizhinji
Zororo reIsita rinosanganisira zviitiko zvakawanda zvinonakidza, kusanganisira maEggs n 'Beggin Dog padhigiramu uye kukwikwidza kwemotokari, mhuri Eggstravaganza munzvimbo dzakadai seHinkle Family Fun Center, uye kuvepa Easter kuAlquerquerque Zoo. Vana kana zvipfuwo zvinogona kuwana mifananidzo yavo inotorwa ne Easter Bunny. Easter mazai evha anoitika kwemavhiki mashoma, uye mamwe makuru acho anoitwa kuLos Ranchos uye mune dzimwe nzvimbo dzemunharaunda. Iva wakatarisira kunyanya kudiwa Easter egg hunts for kids inogona kusanganisira kushanyira nemhuka dzekurima , zvakadai sokuvhima pa Old Windmill Dairy.
Tsvaga kuti zvikafu zveAlbuquerque zvinopa Easter brunch, kubva pane zvisiri nyore kusvika zvakanaka. Zvichida kudya mushure-chechi kana kutsvaga chimwe chinhu chakakosha, Easter brunch inogona kunge iri izvo zvinodiwa. Mabhiriki anokwanisa kuitika kumahotera, apo pachava nemhando dzakasiyana-siyana dzebhoti, kana paresitorendi, iyo inopa bhutiketi kana mapeji emitengo. Mamwe maresitorendi anopa musi weSvondo brunch yakazara nehuwandu hwePasika yeSvondo. Hapana chimwe chezvinhu zvakatarwa zvinosanganisira mutero, chinwa kana kuti chidimbu.
Tsvaka Easter Chocolate
Chokoti ye Easter inogona kureva mabhinki, mazai, jelly maharia nemabhora ane mavara ane mavara mazai e robin. Albuquerque ane mukana wekuti ave nehuwandu hwezvitoro zvinogadzira chokoti chavo nemakwenzi. Chero chipi zvacho chauri kutsvaga, chiiwane pane chekuAlbuquerque candy kana chocolate shop.
Isita muNew Mexico kazhinji zvinoreva kutora imwe purogiramu chaiyo musi weChishanu Chishanu kuti atone zvivi zvegore. Rwendo rwegore negore muTome pedyo neLos Lunas rinounza pamwe mazana evanhu vanofamba vanobva kunzvimbo dziri pedo kana kubva kure kure seAlquerquerque naBelen.
New Mexico ine tsika yakareba yekufambisa Easter. Kumusoro kuchamhembe kweMexico, nzira yekufambisa inotora vatambi vanobva kuchechi imwe kuenda kune imwe kune avo vanosarudza kuita saizvozvo. Kunze kweChimayo, machechi muColhas, Nambe, Pojoaque, Las Trampas, Velarde, Espanola, uye Alcade inopa nzvimbo dzezororo uye nzvimbo tsvene.
Chinese New Year muAlbuquerque
Yechina yeJuly Parades
Pemberera Martin Luther King muAlbuquerque
Krisimasi Kudya muAlbuquerque
Best Seattle-Tacoma Kasinasi yeKambera, Zviratidzo uye Mabhoti
Nova Scotia muZvifananidzo
Chocolate Maven Bakery neKafe
Oklahoma City Area School Kutanga Mazuva
Tour de Cure 2017 Bicycling Zviitiko: Washington DC Area
Zuva raamai paFrance
Zvingaitwa kuMay Chau, Vietnam
Mutungamiri weKahors muLot Valley
Zvinofanira Kuita Kana Ichisimuka muCologne
Izvozvo Zvakanaka Kubudisa Vana Vako Kuchikoro Chekugara Kwemhuri Here?